I-Semalt: Iintlobo ezisisiseko zokuhlaselwa kweHacker kunye nokuLungisa iWebhu
Ukufezekisa iinjongo zakho ezijoliswe kwi-SEO kungakuncitshiswa yimiba ethile, iwebhusayithi yakhoukhuseleko luyingomnye wabo. Iimpawu ezivelayo kunye nemibandela ebonakalayo kwicandelo lobuchwepheshe lifuna izinga eliphezulu lokulawula amanyathelo okukhusela.Izibalo zibonisa ukuba ngaphezulu kwe-10% yewebhusayithi ihla ngenxa yokugculela nokuhlaselwa - sildade reguleerimine hind.
Ukuba ngumthengisi wokuqukethwe, ukhuseleko lwakho lwe-inthanethi luninzi. Ukuqesha abaqeqeshikunye ne-SEO eqinileyo yokusingatha ukukhusela i-website yakho yokhuseleko isebenze kakhulu kwinani elithile leenkampani ezisebenzayo kwi-intanethi. Ukusebenza ne-SEOiqinile liqinisekisa abathengisi bezokhuseleko eziphezulu, ukulandelela phantsi abaqhubi abaphezulu, kunye nokuveliswa kwe-backlink ngexesha langempela. Ekuhambeni kwexesha, umxholoabathengisi banomdla ekufezekiseni iinjongo zabo kunye nokuhlangabezana neenzuzo ezinkulu.
uNik Chaykovskiy, uMphathi weMatriki oPhumeleleyo weMatriki iSemalt IiNkonzo zeDivithali, zichaza ngokuhlaselwa kwe-cyber okufuneka usebenze kuyo.
Ngokuqhelekileyo ibhekiswe ekuhlaselweni kwamacala angaboniyo, ukuhlaselwa kwamandla okugqithiseleyo kusebenzisa abathengisi banamhlanjeukudiliza inkqubo yakho yekhompyutha. Olu hlobo lokuhlaselwa lusebenza kwiimeko ezinqabileyo. Hackers usebenzisa i-side side blind ukufikelela kwiwebhusayithi yakhoIinkcukacha zisebenzisa zonke iindlela ezikhoyo kwihlabathi. Emva kokufikelela kwi-PC yakho, abahlaseli bafumana ukufikelela kuzo zonke iakhawunti kunye namaphasiwediukudlula nokujonga ngokuthembeka. Nangona kunjalo, kulula ukufumana ukuhlaselwa kwamandla enkcitho njengoko inkqubo yekhompyutheni yenza ezininziyemisebenzi yedatha ngexesha elifanayo.
Ukuhlaselwa kwamandla eBrutal kulula ukuyifumana. Ukuba yinyathelo elilodwa phambi kwabahlaseli bahlawula kakhulu.Ukuthintela ukukhwabanisa usebenzisa ukuhlaselwa kwamacala angaboniyo, unganciphisa umgobo kwiimvavanyo, kwaye uvale iakhawunti xa unemizamo engaphumeleli.
Ukuhlaselwa kwabantu phakathi
Unxibelelwano phakathi komsebenzisi wokugqibela we-website kunye neqela elikhuthaziweyo lubangela ukuhlaselwa kwe-MITM..Hackers ithatha ulawulo lwewebhusayithi yakho yokhuseleko ngokuthintela iifomanxibelelwano. Kule ndlela yokuhlaselwa, abahlaseli balawulayonke into ngaphandle kolwazi lomsebenzisi wokugqibela.
Amanyathelo okukhusela iMITM
Ukukhusela abahlaseli ukuba bangalawulwa yokhuseleko lakho lewebhu, cinga ukusebenzisaiifutha, iifayili, iiprogram ze-anti-virus, kunye ne-VPNs. Ukusebenzisa ukubethelwa okuthembekileyo phakathi komncedisi kunye nomthengi kunceda ukunqanda abacuki.
Ukuhlaselwa kweqela loluntu
Ngokuqhelekileyo eyaziwa njengonjineli yoluntu, ukuhlaselwa koluntu kuthathwa njengento elulaindlela yokukhawuleza iqini elisekelwe kakuhle. Abaqhawuli bebenzisa le nqubo baphatha abasebenzisi ukuba babonise amaphasiwedi abo kunye neenkcukacha zekhadi lesikweletu.
Abahlaseli bafumana indlela yokuphatha iinjongo zabo eziphezulu ngokudala ubudlelwane obufudumelenabo. Uhlaselo lwezobunjineli zentlalo lunokuthintelwa ngokukhuthaza abantu ngesidingo sokugcina ulwazi lwabo olubukhali.
Ukuhlaselwa kwesiseko sabathengi
Kulolu hlobo lokuhlaselwa, abahlaseli badibanisa ukhuseleko lakho kwiwebhusayithi ngokusebenzisaukuchofoza amaxwebhu avulekileyo kunye nokuchofoza. Ngokwenza njalo, abacuki banokukhokelela kwiwebhusayithi enobungozi eyenza ukuba usengozini yokuhlaselwa.
Ukudala ulwazi kubasebenzi bakho ngesidingo sokunyamekela xa usebenzisaintanethi yoluntu ibalulekile. Hackers bahlale beqaphile ngokulinda umsebenzi ukulanda isofthiwe mahala kwiwebhusayithi enonya, ke hackyonke intlangano. Qaphela kwaye uqaphele xa usebenzisa i-WIFI yoluntu ukuze ugweme ukuhlaselwa.
Ukuhlaselwa okukude kusetyenziswa ngokusasazeka kwiintsholongwane ezinobungozi, kufumaneke ukufikelela kwiinkathazoulwazi, kwaye udale ukuchithwa kwii-PC ezijoliswe kuyo.
Ukuphaphama ngokukhusela konke ukukhubazeka kwesiza sakho kukugcina ukhuselebahlaseli. Cinga ukuphunyezwa kokubambisana nokukhuseleko kwe-IT kubangaphakathi.
Ikhuseleko lakho lewebhu libaluleke kakhulu xa lifika ekuthengiseni idijithali nokuqukethwe.Inani elithile lezityalo zoshishino lihla rhoqo ngenyanga ngenxa yokuhlaselwa kwabahlaseli abanobungozi. Ukuqesha abaqeqeshi be-IT ukugcina uhlaziye kwayeukuthintela indawo yakho ekuhlahleni ngenxa yesigqubuthelo.